I'm Good Explained — njem Lee - Official Site
Ọ sịrị na m bụ onye ikpe mara na m ka na-adịghị nwere m ikpe ụbọchị /
Nke a bụ ebe ọtụtụ ndị kwere ekwe na-achọta onwe. Anyị maara na ihe mgbu, idomo, na eleghị anya, ọbụna ọnwụ na-eru nso. Ụjọ nwayọọ agwa ya ná ntị anyị na-agwa anyị na a ikpe bụ njedebe nke ụwa- na ọ bụ maka anyị. Ma ọ bụghị ihe Jehova gwara anyị. Jehova kwere nkwa na anyị na anyị ga-akpọ ndị ghara ikpe mara n'ihu Ya n'ihi Christ (Ndị Rom 4:5). Ya mere anyị agaghị emebi mgbe (John 3:16). Ọnwụ abụghị njedebe maka Christian; ọ bụ mmalite nke ọhụrụ, ebube karịa nke eziokwu.
M na detụrụ na m na hụrụ Ya, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị obere ihe atụ /
N'ihi na Jizọs nwụrụ ma wetara m Chineke (1 Peter 3:18), M na-edetụ ire ma hụ na ọ dị mma. Ma ezi ihe nke m na-detụrụ ugbu a bụ nanị obere ihe atụ. Otu ụbọchị m ga-anọnyere Onyenwe m, na-enwe ịdị mma Ya na zuru.
Amaghị m ihe ha na-eche, Amaghị m na ha na-eche echiche /
Bro mkpụrụ obi m si anwụ anwụ dị ka Mario mgbe ọ blinking /
Na nke a akara, M na-enwe a nta fun na Mario akwụkwọ. Ma a bụ m akpachara anya ka na-ekwu na na na na anwụ anwụ. M nwere ike merụọ, M nwere ike mbà, M nwere ike ọbụna gbuo. Ma mkpụrụ obi m ike mgbe a ga-egbukwa ma ọ bụ bibie, n'ihi na m na nchebe na Jesus. Mgbe Super Mario na-akawanye na pụrụ iche blinking kpakpando, n'agbanyeghị ihe iro ọ na-agba n'ime, ha apụghị imerụ Ya. The bụkwa otú ahụ ka nke a gbapụtara mkpụrụ obi. Ị nwere ike dọwara m ahu ka shreds, ma mkpụrụ obi m ga-anọgide na-emebibeghị. Na Chineke doziri a obodo anyị (Ndị Hibru 11:16).
Ha hụ m jupụtara n'ọṅụ, dị ka m na-adịghị ihe O na-aṅụ /
Iko jupụtara miri di ndu Bro, M ịṅụ ya ma kelee Ya, yessir /
Ndị mmadụ agaghị ahụ m alụ ọgụ maka ọṅụ n'ime ikpe na e kwesịrị ịghọtahie. "Olee otú ọ pụrụ ọchị na a oge dị ka nke a?” Kama m na na ọ bụghị crazy ma ọ bụ mmanya na-egbu, Na na na ala. M na sipped si ọma nke ndụ ebighị ebi, na mkpụrụ obi m bụ na afọ ojuju (John 4:13-14).
M nwere ike ọ gaghị emeri a Grammy, ma ọ bụ esi ọzọ stellar /
Ma a ga m enweta ụgwọ ọrụ n'aka Onyenwe m, ọ bụghị ihe dị mma /
M nwere ike ọ gaghị iduzi ọzọ, M nwere ike ọ gaghị na-ere a milli /
Ma m na e zụrụ site m King, Ọ bụ ruo mgbe ebighị ebi na m /
M dere akụkụ a n'ihi na, na ụwa n'anya nke ịdị elu ihe ịga nke ọma n'ihi na onye na-ese na-ere a ụyọkọ ndekọ na-ụyọkọ nke ude. Ma ọbụna ma ọ bụrụ na m na mgbe esi ọzọ award ma ọ bụ ala ọzọ chaatị, Adị m mma. M wee ghara ụgwọ ọrụ site n'ụwa, ma a ga m enweta ụgwọ ọrụ site Jesus. My ndia nwere ike ọ gaghị ike zụrụ site onye ọ bụla, kama m na-ama na e zụrụ na a gbapụtara agbapụta Jesus.
Ya mere, ihe ha na-ekwu okwu bayere? No ha nwere ike ghara ịkụ aka m ala /
Yessir m na-eche ihe mgbu, ma Jesus nwetara m now /
Ọzọkwa, Achọghị m ka m folks na-eche echiche M pụtara Kraịst adịghị enweta ikpe, ma ọ bụ ọbụna na anyị na-eche arọ nke ndị ọnwụnwa. Anyị na-abụkarịkwa ndị ike ndị tara akpụ, ma Jizọs nwere anyị.
Ọ bụ ya mere m na-eme mkpọtụ, na ihe mere m na-agba ọsọ ike /
Ọ bụ ya mere m na-aga ozodimgba, gbụpụsịrị ọnụ mmiri ha enwe Ogwe /
All nke eziokwu m kwuru n'elu na-akpali m. Nke a bụ ya mere m na-ekwusara ozi ọma na-achụpụ albums. Nke a bụ ya mere m chọrọ gbụsara ọnụ mmiri Ogwe na enwetaghị ndị mmadụ mata. Achọrọ m ịgwa ha otú ha isi iyi nke ihe nile dị mma.
Mmekọ ị maara na m na ọma na-aga /
Mgbali emepụta diamonds na ọkụ ọganihu ndị gold /
E nweghị ihe ọ na mbara ala a na nke ahụ na-eju afọ mkpụrụ obi m /
A na me bi n'ihi na echi, taa ahụ ókè, Chiefs na sho, Adị m mma/
Were niile m ego, Adị m mma/
A-abịa mgbu, Adị m mma/
Yeah ha nwere ike igbu m, Adị m mma/
-Anwụ anwụ bụ uru, Adị m mma/
M na-adịghị ekwu na anyị na-eche ihe mgbu /
M ch si na ị pụghị iri ka ayi si egwuregwu, akpata homie anyị ezi /
Ndị a lyrics ndị mara mma onwe nkọwa. Na onodu nke a song "ezi” apụtaghị na m zuru okè ma ọ bụ ezi omume nke onwe m. Bible na anyị maara na nke ahụ abụghị eziokwu nke ọ bụla n'ime anyị (Ndị Rom 3:11-12). "Adị m mma” bụ ozo esi ekwu, "M na jụụ” ma ọ bụ "Ihe niile si ok.” N'ihi na anyị na na Christ, i nwere ike ewere ihe niile n'aka anyị, ma anyị na ihe ọma n'ihi na anyị na-akwụsịtụ na Christ.
Ama m na I'ma-ata ahụhụ, na ga-eme ka m siri ike karị /
Ọnwụ bụ nanị a doorway were m m kwesịrị ntụkwasị obi n'anya /
Ndeputa dika Ọrụ 14:22 na 2 Timothy 3:12 echetara m na dị ka a Christian m ga-ata ahụhụ. Na ndeputa James 1:4-8 na Ndị Rom 8:28 echetara m na Chineke na-eji na-ata ahụhụ na-eme ka ihe m dị ka Kraịst. Ndị a ọnwụnwa nwere ike ọbụna iri ndụ m, ma ndị kwere ekwe na-adịghị na-atụ ọnwụ egwu. Jesus bu ọgbụgba n'ọnwụ, na ọ bụ ka mma anyị ga-eso Jizọs karịa ịnọ ebe a,.
The n'Anya mkpụrụ obi m bụ na m, i nwere ike ịma jijiji na nwanne /
Ma unu agaghị akụ aka m ala ma ọ bụ were m n'okpuru, mee ka égbè eluigwe /
Ka oké ifufe na-nsogbu n'obi mgbe niile anyị na-afụ ụfụ anyị /
Ha apụghị iweghara Onyenwe anyị n'aka anyị dị egwu O nwetara anyị a mkpebi /
ọ bụghị ikpe mara, Ọ bụ na anyị na ya anọgide ugbu /
Mgbe doo m Ọbụna na ọ na-enye m ogbo ọnụnọ /
Ikpeazụ ndị a isii Ogwe ịgba akaebe na otu anchoring eziokwu, Jehova nọnyeere m. Na n'agbanyeghị ihe merenụ, Ọ ka ga-adị n'ebe m. E nwere nnọọ ihe pụrụ ikewapụ m n'ebe ịhụnanya Chineke na Kraịst! (Ndị Rom 8:38-39)
Ihe kacha mkpa banyere m bụ eziokwu ahụ bụ na m na-n'otu aka Jesus. Nke na-apughi-anapụ m. Bụla na-abịa m ụzọ, Ọ kụziiri m na-ekwu, "Ọ dị mma na mkpụrụ obi m.”
M.J.S. • August 19, 2013 na 8:41 Abụ • zaghachi
siri ike, dị ike music-nne-. M na-ele video maka “Adị m mma,” na ọ hapụrụ m ọchịchọ ịmata dị ka ihe mere ị họọrọ idaha nke Muslim girl na-etikarị na-agụ Bible?
Alakụba kwere na Chineke nile na-Amụma na Scriptures ha we me ka ndị dị iche iche. E nwere ebukarịghị kwesịghị na ndị Alakụba na-ekweghị na Jizọs. Isi ihe dị iche na nkwenkwe bụ na ndị Alakụba na-ewere Jizọs dị ka onye amụma, na na Islam dịghị onye amụma a na-ahuta ka ịrịba ama karịa ibe.
Nzube m maka nke a post bụ na-arụrịta ụka okpukpe ma ndinam ẹbọhọ nghọtahie na-akwụsị mgbasa nke ụgha ọmụma. Amaghị m ihe ọ pụtara kpọmkwem ibu n'obi na-ezitere na idaha(na ihe mere m na-achọkarị ịmara), ma ya onwe ya agbagọkwa Muslim kweere usoro banyere Scriptures.
Woleogundele • August 19, 2013 na 8:41 Abụ • zaghachi
Loyd • August 19, 2013 na 8:41 Abụ • zaghachi
Biko ị nwere ike ime nke a n'ihi amara m. M ga-achọ ịmata gị echiche na okwu oke. Kpọmkwem na akụkụ ebe ị RAP na “M na-agbasa ezinụlọ ụfọdụ, M na-mara ime ka rekeji.” M nwere m onwe ha ahụ a amaokwu ma m chọrọ ịmata kpọmkwem ihe ị pụtara. M na-aghọta ma ọ bụrụ na ị na-adịghị oge ime nke a na-adịghị ọsụsọ ya. Na-eru ndị mmadụ Njem. Eme ya thang! Chukwu gozie!
Leslie • August 19, 2013 na 8:42 Abụ • zaghachi
My mbụ ikenye :) M nnọọ obi ụtọ ị posted a song na Akwụkwọ Nsọ kwuru okwu ya na iche echiche n'azụ gị lyrics. My 9-afọ nwa na m n'anya ma gị music, na m na-echi anya na-eji ụfọdụ àgwà oge na ya tupu anyị abanye na Ista izu ụka. M ike na-eche ka ọ nọrọ n'akụkụ-na-n'akụkụ na ya na-aga site a lyrics na-ele anya ruo ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nke ọ bụla n'ime. Ọ ga-abụ obi ụtọ! Daalụ njem, ịhụnanya dị ukwuu site Orlando, FL!!
Wayland Wilson • August 19, 2013 na 8:42 Abụ • zaghachi
Obi ụtọ na ya n'ebe a unu na DC ebe. M mgbe ụfọdụ kpọgidere na Chinatown Hope na-agba ọsọ n'ime unu ndusụk. Peace.
Brandon Caron • August 19, 2013 na 8:43 Abụ • zaghachi
Obi tọrọ ya ụtọ mara na ị nwere a blog. Ga-amalite achọpụta na site n'oge ruo n'oge. M ahụ amaghị.
Aaron Fillmore • August 19, 2013 na 8:43 Abụ • zaghachi
M ụtọ feelin Mọ aga na mgbatị-ege ntị na nke a…mmadụ na-ajụ ihe m na-ege ntị oke-m na-agwa em #imgood
migisha Boyd • August 19, 2013 na 8:43 Abụ • zaghachi
mmekpa akwongele! _luganda n'ihi na Chineke na-agọzi gị”
Shola Rock • August 19, 2013 na 8:43 Abụ • zaghachi
Na-rapping maka Christ. M n'anya gị niile albums. All na-Christ eche nanị na Biblical. Olu gị bụkwa jụụ na gafere ị na-eji na-egwu; Chineke na-agọzi gị Bro!!!
Kananelomojaki • August 19, 2013 na 8:43 Abụ • zaghachi
nke ọmarịcha GNU
Henock Teshome • August 19, 2013 na 8:44 Abụ • zaghachi
Ezi stof na-ekele gị maka nkọwa.
Tina • August 21, 2013 na 11:18 Abụ • zaghachi
My nwa (9) na i luv a song! Ndị dị otú ahụ a dị egwu na ike pụtara na ọ :)